Kuthiwani uma isikhumba kushiswe ilanga? Yiqiniso, i-athikili kwi efanayo timu ayifanele kakhulu ekwindla, kodwa, njengoba isisho - waxwayisa is forearmed. Ngakho, ake sixoxe ngezindlela ezahlukene ukusiza uzole ukuvuvukala isikhumba okubangelwa ilanga kakhulu asebenzayo.
Okuhle kunakho konke, yebo, Ungasingenisi isikhumba sakho ukuze uthola isiphetho esinjena edabukisayo njengoba yilanga. Ukuze wenze lokhu, umuntu akufanele abe ilanga ngesikhathi umsebenzi wayo eliphakeme. Lesi sikhathi, cishe kusukela ngo-11 ekuseni ku-16 ntambama. Ngaphambi nangemva baleso sikhathi ezikudingayo le kwelanga kufanele futhi nayo ibingaba eyesikhashana, ngokuvamile isikhathi eside impela amahle amaningi bethamele ilanga tan ambalwa owawuthatha ihora, uma isikhumba ungeyena ezimhlophe kakhulu futhi ezacile. Futhi, ngokuqinisekile, akufanele sikhohlwe mayelana nokusetshenziswa ilanga futhi ukuvikelwa emisebeni yelanga.
Zonke lezi amathiphu zinhle, uma ngesikhathi esifanele. Kodwa lapha okungalindelekile kwenzekile - wena wahamba wayolala ogwini. Okufanele ukwenze uma kushiswe ilanga? Okokuqala - ukuya umthunzi futhi ukunikeza ukufinyelela isikhumba kuphekeke emoyeni obandayo. Kwaphela nje ungalingi ukuya conditioner emoyeni noma uxhaso - ngakho esikhundleni impumuzo behlise isikhumba wokushiswa ungathola abandayo, ngoba umzimba e Ngezikhathi ezinjalo, sikhanyise. Vele uhlale emthunzini emoyeni kuphole kancane.
Uma isikhumba selupholile phansi, ungaqala umsebenzi wokutakula. Okokuqala, ezinhle kuzosusa ukucasuka kokuqala kusuka yilanga eshaweni cool: isikhumba ehlanzekile ngothuli namanzi abandayo kuzosusa a ukuvuvukala kancane. Ngaphambili, uma kubaswa emuva kwelanga, indlela yokuqala ogogo bethu bonke babengaphansi yogurt noma fat ukhilimu omuncu. Bacela ukungifundela gcoba endaweni bese uvumele cwilisa ukusha. Manje odokotela sebekubeke ngokumelene le ndlela. Noma yimuphi ukudla okunamafutha wenza ucingo ezimbotsheni zesikhumba kanye abakuvumeli ukuba sikwazi ukuphefumula, futhi uma lesibili degree burns ukufinyelela, imikhiqizo yobisi singase sithwale ukutheleleka. Lapho isandla akuyona noma yiluphi uhlobo lokuthokoza inketho, ukhethe ephansi fat yogurt noma kefir.
Enye into saziso ohlwini nezimpendulo embuzweni ukuthi yini okumele uyenze uma kubaswa elangeni - amanzi okuphuza. Ngaleso sikhathi, ngenkathi wena ilanga, umzimba ulahlekelwa okuningi uketshezi. Ngakho-ke kubaluleke ukwenza nokubuya kwakhe. Ukuphuza akufanele kube ezineqhwa, njengoba uma kungenzeka ashisayo. Okuhle kunakho konke ukuthi, uma amanzi ethafeni ngaphandle ushukela flavorings. Phuza ungajahi, kodwa zama ukuphuza amalitha okungenani isigamu.
Isici yilanga - ngobuqili babo. Ingase ingatholakali ngokushesha, futhi ngempela ayinangozi ububomvu kancane ngemuva kwamahora ambalwa ungavula ku slazyaschuyu isikhumba nokuvuselela Ukugodola, imfiva, isicanucanu futhi namandla jikelele zomzimba. Kuthiwani uma kushiswe ilanga futhi manje uhlushwa lezi zimpawu? Thatha tablet "ibuprofen", aspirin noma yimuphi omunye izidakamizwa eqeda ukuvuvukala. Kuyokusiza ukususa izimpawu ezinkulu umkhuhlane. Ngaphezu kwalokho, zama athobele embhedeni ukuphumula.
Uma uhlela ukuba iholide nge amaningi bethamele ilanga, ukhetho best - ukuletha kanye amathuluzi ambalwa ekhemisi. Ukuze okungenhla engeza ibhodlela aspirin panthenol - ke ngempumelelo kususa asele izimali ububomvu futhi uphulukisa yilanga. Ibhalsamu "Lifeguard" kuyinto ngempela onjengaye. Ungakwazi futhi ukhethe nje ezimbili endaweni eyodwa - manje izitolo ithengiswe eningi emva-ilanga onezinga le-SPF ukwengeza panthenol. Ukusebenzisa kwabo, awukwazi nje suka isikhumba sakho somzimba, kodwa futhi moisturize ngemva kwelanga.
Zonke lezi amathiphu kuyokusiza eholidini ukuze uphumule futhi Ungethuki uma kufanele ucabange ngalokho okufanele ukwenze uma kubaswa elangeni. Ngakho - kuzohlala omuhle.
A biopsy we indlala yegilo: ukuthi kuyini, indlela esenziwe? A biopsy we indlala yegilo: ukulungiselela, ukuhumusha imiphumela cwaningo, imiphumela
Izimbali Chicory in wendabuko imithi. Izimbali Chicory ziwusizo futhi uzisebenzise kanjani?
Diving Cliff: bagxume besuka emazwini ukuphakama nokubulawa izakhi Acrobatic
Operation "Bagration". Belarus Ukukhululwa uhlelo (1944)